ကျန်းမာသွယ်လျ လှလှပ (ချော; အစိမ်းရောင်လွင်ပြင် )
ကျန်းမာသွယ်လျ လှလှပ (ချော; အစိမ်းရောင်လွင်ပြင် )By admin – May 16, 2011Posted in: News & Articles credit & Source:
လူတိုင်းဟာ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပြီး အချိုးအစားကျနတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်လိုကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ တကယ်လို့ သင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ဟာ ရှိသင့်တာထက် များနေပြီဆိုရင် အလှအပအတွက်ရော၊ ကျန်းမာရေးအရပါ ၀ိတ် လျော့ဖို့ လိုနေပါပြီ။ ကျန်းမာရေး သုတေသီတွေရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်မှာ ပိန်တဲ့သူတွေထက် ၀တဲ့လူတွေဟာ ရောဂါဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ပိုများပြီး ၀သူတွေမှာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ရောဂါ အမျိုးအစားဟာလည်း ပိုမိုများပြားတာကို တွေ့ရတာကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ၀ခြင်းဟာ လုံးဝကိုမကောင်းဘူးလို့ ဆိုပါတယ်..
ဒါပေမဲ့ အလွန်အကျွံ ပိန်တာမျိုးကျတော့လည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူးနော်.. ရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းတာဟာ မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်ရာရောက်သလို လှချင်သူများအတွက်လည်း အ၀မတိုးစေဘဲ မိမိနှစ်သက်ရာ အ၀တ်အစားကို လှလှပပလေး ၀တ်ဆင်လို့ ရပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ဟာ ၀လာပြီဆိုရင် အ၀တ်အစား ရွေးရခက်လာသလို ရှိပြီးသားအ၀တ်တွေလဲ မတော်တော့တာမျိုး၊ လက်ရှိခေတ်ဒီဇိုင်းနဲ့လည်း လိုက်ဖက်မှု မရှိတော့တာမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်.. ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ Fit ဖြစ်တဲ့ အ၀တ်အစားတွေဟာ ၀တဲ့သူနဲ့ ဘယ်လိုမှ ကြည့်မကောင်းတတ်ပါဘူး..
ဗိုက်ခေါက်က အဆီပြင်ကြီးကြောင့် ကြည့်ရခက်သလို ကြီးမားတုတ်ခိုင်တဲ့ လက်မောင်းတွေ၊ ခြေထောက်တွေကြောင့်လည်း အလှပျက်စေနိုင်ပါတယ်.. လှချင်လို့ တန်ဖိုးကြီးပေးဝယ်ထားပြီး ၀တ်ကာမှ အ၀တ်ကြောင့် အလှပျက်ရတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. ဒီတော့ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းသိမ်းခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးအတွက်ရော အလှအပအတွက်ပါ ကောင်းမွန်တာမို့ လူတိုင်း မိမိရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် အချိုးအစားကို ထိန်းသိမ်းသင့်ကြပါတယ်နော်။
လူတစ်ယောက်မှာ စပြီးဝလာပြီးဆိုရင် ဗိုက်ခေါက်က အရင်ဆုံး ထွက်လာပါတယ်.
မိမိဝမ်းဗိုက်ကို ဆွဲကြည့်ပါ။ အဆီပြင်က ထူနေပြီဆိုရင် သင် ၀နေပါပြီ။ သို့မဟုတ် ၀စပြုနေပါပြီ။ မိမိကိုယ်ကို ၀နေတယ်လို့ မသိသာ မထင်ရှားဘူးဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၊ အရပ်အမြင့်နဲ့ တွက်ချက်ကြည့်ရင် ၀တယ် မ၀ဘူးဆိုတာ ဆုံးဖြတ်လို့ ရတဲ့နည်းလမ်း ရှိပါတယ်. ထိုနည်းကိုတော့ B.M.I (Body Mass Index) လို့ခေါ်ပါတယ်.. တွက်ရမဲ့ ပုံသေနည်းက BMI = [weight / (height x height)] ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါက ကိုယ်အလေးချိန်ကို ကီလိုဂရမ်နဲ့ အရပ်အမြင့်ကို မီတာဖြင့် တိုင်းတာသူများ တွက်တဲ့နည်းပါ။
ကျွန်မတို့ မြန်မာတွေက ကိုယ်အလေးချိန်ကို အများအားဖြင့် ပေါင်ချိန်နဲ့ အရပ်ကိုတော့ ပေ၊ လက်မ တို့ဖြင့် တိုင်းကြတာ များပါတယ်.. အလေးချိန်ကို ပေါင်နဲ့တိုင်းပြီး အရပ်အမြင့်ကို လက်မဖြင့် တိုင်းသူများကျတော့ BMI = [weight / (height x height)] x 703 ဆိုတဲ့ ပုံသေနည်းနဲ့ တွက်ချက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂. မနက်ခင်းတိုင်း အယ်လ်မွန်စေ့ လက်တစ်ဆုပ် ( ၆ စေ့ခန့်) ကို စားသုံးပေးပါ။ အယ်လ်မွန်စေ့ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန် ကောင်းမွန်သော အစေ့ အဆံ တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်.. ၄င်းမှာ ပါဝင်တဲ့ ပရိုတိန်းဟာ အဆီများကို ချေဖျက်ရာမှာ ကောင်းမွန်စေပါတယ်..မြန်မာပြည်တွင် အယ်လ်မွန်စေ့ ရရန် ခက်ခဲပါက နေကြာစေ့ ဆားမပါပဲ လှော်တာ စားနိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်…
Posted May 17, 2011 at 3:27 AM	မမရေ ကျွန်မာရေးအသိပညာပေး ဗဟုသုတလေးအတွက် ကျေးဇူးပါလို့..
Posted May 20, 2011 at 8:53 PM	Angel ရေ shweBeauty ကို လာလည်တဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးပါ Reply	Htet
Posted May 22, 2011 at 8:13 PM	မမချောရေ ကျေးဇူးပါ…မီးမီး ၂၅ ကျော်ပါတယ်… Reply	eithandarkhaing
Posted May 24, 2011 at 12:39 AM	ဟိုင်း
Reply	su hlaing
Posted June 3, 2011 at 5:56 PM	၀ိတ်လျှော့လိုတဲ့ သူတွေ အတွက်ပဲ ရေးထားတယ် နော် စု က ၀ိတ်တက်ချင်တာ ပြောရမယ်ဆိုရင် အရမ်းကို ပိန်နေလို့ နည်းနည်းပြည့်ချင်ပါတယ် အဲဒီ့အတွက် လဲ ရေးပေးပါအုံးနော် ကစားတယ် ဒါပေမယ့် ခဏပဲ ကစားလို့ ဘာမှ မဖြစ်လာဘူး ဟိဟိ ရေးပေးပါအုံးနော် ကျေးဇူးပါနော်
Posted June 15, 2011 at 10:34 AM	လာလည်ပြီးဝင်ဖတ်သွားပါတယ်၊
international look magazine မှာဝင်ရေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်၊
Reply	win thet nwe
Posted July 21, 2011 at 5:25 PM	ခုလို ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
အစ်မ ရေးတဲ့ စာတွေ တော်တော်တော့ ဖတ်ဖူးပါတယ်…
အားလုံးလိုလို စေတနာပါပါနဲ့ ကောင်းကောင်းလေး ရေးပေးတဲ့ အတွက် ကောင်းပါတယ်..
Reply	May Mi
Posted August 2, 2011 at 12:35 AM	ဒီဆောင်းပါးလေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဟဲဟဲတော်သေးတယ် ၂၁ပဲရှိသေးလို့။ LeaveaReply Cancel reply
Related Posts	News & Articlesအင်တာဗျူးသွားဖို့အဝတ်စားတစ်ကိုယ်ရေကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များဒီကောင်လေး ကိုယ့်ကို စိတ်ဝင်စား နေတာလား? Rose Hip oil အကြောင်းတစေ့တစောင်းအမြဲလှနေစေဖို့ လျှို့ ဝှက်ချက်များ	Recent Posts